तपाईले चलाउदै गरेको या अब नयाँ किनेर साउनदेखि विदेशबाट मोबाइल ल्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? - Ektm news
Home›विज्ञान प्रविधि›तपाईले चलाउदै गरेको या अब नयाँ किनेर साउनदेखि विदेशबाट मोबाइल ल्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन ?
तपाईले चलाउदै गरेको या अब नयाँ किनेर साउनदेखि विदेशबाट मोबाइल ल्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल वाँस्कोटाले केही दिनअघि आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरी मोबाइल चलाउन नदिने बताए। यसले विदेशबाट मोबाइल ल्याउन पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको छ।
आईएमई नम्बर दर्ताका लागि एयरपोर्टमा डेस्क राखिएको र त्यसलाई बिदेशबाटै फारम फर्न मिल्ने गरी अनलाइन सिष्टम समेत बनाउन लागिएको मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल लाइभसँग बताए। आईएमईआई नम्बर दर्ताका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन। विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुको लागि अझ सहज हुने गरी आफुहरुले योजना बनाएको उनले बताए।
देशमा ठुलो मात्रामा तस्करी गरेर मोबाइल भित्राइएको गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो। यसबाट मोबाइलबाट हुने अपराध धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन। कुन मोबाइल कसको नाममा दर्ता छ भन्ने पत्ता लाग्ने भएकाले अपराध नियन्त्रण सहज हुने छ।सबैजसो देशमा आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेका मोबाइल प्रयोग गर्न दिइन्न। नेपालमा पनि सरकारले मोबाइल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न लागेको हो।
यी चार राशी हुने व्यक्ति हुन्छन् सबैभन्दा ...
पेटमा बच्चा भएको बेलामा यौन सम्पर्क गरे ...
जसले नेपालमा युएस बंगला विमान भित्र्याए, दुर्घटनामा अस्ताए उनी पनि
गएको हप्ता आकस्मिक अवतरण गरेर जोगिएको थियो दुर्घटनामा परेको विमान
एमाले-माओवादीः पार्टी एकता कार्यदलको प्रतिवेदन बन्दै
खुशी को खबर अब सात दिनमै स्मार्ट लाइसेन्स
खुसिको खबर मात्रै 2लाखमा बन्छ यस्तो घर !हामी लाई बोलाउनुहोस
काठमाडौंमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? हिजो आज कति लाग्छ खर्च? जान्नुहोस (सम्पूर्ण सामग्रीको मूल्य सुची सहित)
तरकारीखेतीबाट यसरी भयो कसैले नसोँचेको आम्दानी
मनकामना मन्दिरको छानामा सुनको जलप